What kind of jobs should I apply?
ဘယ်လို အလုပ်မျိုးကို လျှောက်သင့်သလဲ။
ပထမဦးဆုံး သင့်ကို စိတ်ဝင်စားစေသော၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်များကို စာရင်းပြု ကြည့်ပါ။ သင်၏ ကိုယ်ပိုင် စွမ်းရည်၊ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်၊ စိတ်ပါဝင်စားမှု၊ တန်ဖိုးထားမှုများနှင့် ရွေးချယ်ထားသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းကို ဆက်စပ်ကြည့်ပါ။ သင်၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ရွေးချယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သေချာကျနပြည့်စုံစွာ လေ့လာစုံစမ်းရန် နှင့် အလုပ်မရှာခင် သင် ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးကို လုပ်ချင်သည်ကို ဂဃဏနသိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အလုပ်ရှာဖွေ လျှောက်ထားခြင်း မစတင်မီကပင် လိုအပ်သော လေ့လာစုံစမ်းမှုများကို အရင်ပြုလုပ်ထားသင့်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် လူအများနှင့် အခက်အခဲမရှိ ပူးပေါင်းဆက်သွယ်နိုင်ပြီး ခရီးသွားရခြင်းကို ဝါသနာပါ နှစ်သက်သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါက ခရီးသွားလုပ်ငန်းအား အသေးစိတ် စူးစမ်းသုံးသပ်ကြည့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းထဲမှ သင်စိတ်ဝင်စားသော အလုပ်အကိုင် ရာထူးများကို ရေးချကြည့်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဟိုတယ်တစ်ခုရှိ ဧည့်သည်များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးရသော အလုပ်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ ခရီးစဉ် ရေးဆွဲသူ စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
To start, LIST potential jobs and career options that interest you. UNDERSTAND your individual abilities, personality, interests and values in relation to potential career options. You need to thoroughly research your career options and know what you want to do before you begin your job search. Always complete the search before you begin looking.
If you can build relationship with people and enjoy travelling, you may want to explore tourism sector. Within the sector, you could list down roles that interest you e.g. beingacustomer services personnel atahotel, being an itinerary planner at tour agency.
#HumanLibraryMM Aug 2017
You owe it to your friends to be different
A Day in the Life of an Embassy Staff Member